Public Health in Myanmar: Introduction to Genetic Inheritance
ဗဟုသုတအတွက် ဖတ်သွားပါတယ်။ တစ်ကြိမ် ထဲနဲ့ နားမလည်နိုင်တာမို့ ကော်ပီကူးသွား ပါတယ်။ ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန်။
ဆေးပညာဗဟုသုတတွေ ကို ဖြန့်ဝေပေးသော
အချို့ ကို မှတ်စုထုတ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားပါတယ်-
တစ်ယောက်တစ်မျိုး ကဏ္ဍတစ်မျိုးစီ သေချာဖော်ပြပေးတာကြောင့် စာဖတ်သူအားလုံးအတွက် ဆေးပညာဗဟုသုတ စုံလင်နိုင်ပါတယ်..
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Genetic မျိုးဆက်သီအိုရီအရ ဒီ Genes တွေဟာ ဆက်လက်သယ်ဆောင်တယ်လို့ နားလည်မိတယ်။ အကယ်၍ လူတဦးတယောက်မှာ ကင်ဆာ သော်လည်းကောင်း စိတ်နဲ့ ပတ်သက်သော ရောဂါသော်လည်းကောင်း၊ သွေးတိုးသည်လည်းကောင်း ရှိခဲ့လျင် နောက်မျိုးဆက်ဟာ တချိန်ချိန်မှာ ပြန်ပေါ်လာမှာ ဒီမျိုးရိုးဗီဇ ဆက်ခံမှုသဘောအရ ပြန်ပေါ်လာမှာ သေချာသလောက်ပဲလို့ ထင်ရတယ်။ ဆိုလိုတာက နောက်မျိုးဆက်ဟာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးက ပိုဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိတယ်။ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် Gene မှာ ပါဝင်တဲ့ မကောင်းတဲ့ဆဲတွေကို ဖယ်ရှားတာတို့ သန့်စင်တာတို့ လုပ်လို့ရပါသလား။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
စာလာဖတ်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀င်းဇော် ပြန်ဖတ်လို့ နားမလည်တာ ရှိရင်မေးနိုင်ပါတယ် သိသလောက် ပြန်ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ မသက်ဇင်ရေ ဒါက မိတ်ဆက်ပဲ ရှိသေးတယ် ရောဂါအကြောင်းတင်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ဒီထက်ပိုများလာနိုင်လို့ မှတ်စရာက ရှိဦးမှာ သေချာတယ် ပြန်လာဖတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဆရာ Dr ၀င်းသိန်း- ကျွန်မက Genetic ကို သိပ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်မရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး စိတ်ဝင်စားဆုံး ဘာသာရပ် ဖြစ်လို့ ရေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘာသာပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အချက်အလက်ပဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်အမှားပါနေရင် ထောက်ပြပြီး ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အမည်မဖေါ်လိုသူက Gene လို့ ခေါ်တဲ့ ဗီဇနဲ့ ဆဲလ် ကို ရှင်းလင်းပုံမရလို့ ဆဲလ်အကြောင်းကို နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်။ သက်ရှိတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အနုကြည့်မှန်ပြေင်းနဲ့ ကြည့်မှသာ မြင်နိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီဆဲလ်ကိုမှတခါ ပိုမိုသေးငယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သူ့အလုပ်နဲ့သူ ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ဆဲလ်တခုလုံးရဲ့အလည်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ Nucleus ဆိုတာ ဆဲလ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုသာ ဖြစ်ပြီး Genes ကို သိမ်းဆည်းပြီး မျိုးဆက်တခုကနေ နောက်မျိုးဆက်ရောက်အောင် သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ တာဝန်ကိုယူတယ် ။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဆဲလ်ဟာ Gene ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း မဟုတ်ပါဘူး Gene သာ ဆဲလ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆဲလ်အားလုံးဟာ ပထမဦးဆုံး သက်ရှိဆဲလ် Gamete တခုတည်းမှ တထေရာတည်း (identical) ပွားလာတဲ့အတွက် ဆဲလ်တခုစီမှာ ပါဝင်တဲ့ Genes အားလုံးဟာ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမည် မဖေါ်လိုသူ မေးတဲ့ ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေက နောက်တင်မည့် Genetic Diseases များအကြောင်း ပို့စ်နှစ်ခုမှာ အလုံအလောက်ပါပါလိမ့်မယ်။ စောင့်ဖတ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Bamarlay - Myanmar Man said...
A very nice blog. I am very impressed with the Public Health in Myanmar. I have written an article about your blog on my blog at Public Health in Myanmar on Myanmar Man's Diary. Please keep up.
ဒီပို့စ်လေးကို အရမ်းနှစ်သက်သဘောကျပြီး ကျေးဇူးတင်သည့်အတွက် ကျနော် အီးမေးလ်မှတဆင့် ဖြန့်ဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ ဘလော့ဂ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ချင်တဲ့ သဘောပါ။ ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူရေးတယ်။ ဘယ်ကရသလဲဆိုတာပါ ကျနော်အတိအကျ ဖော်ပြပြီး ပို့မှာပါ။ PDF File အနေနဲ့ ပို့ချင်တာပါ။
စာလာဖတ်တဲ့အတွက်ရော အခုလို စိတ်ဝင်စားပြီး ဖြန့်ဝေပေးချင်တဲ့ စေတနာအတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုရုပ်ဆိုး။ ဒီပို့စ်က မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်း မိတ်ဆက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါတွေအကြောင်း ပထမပိုင်းကို မနက်ဖြန်တင်ဖို့ ရှိလို့ ဆက်ပြီး လာဖတ်ဖို့ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။